Taasi ma jirto hagaajinta joojinta la og yahay in marti galido iyo Apple u muuqataa in waxa ay raacaan si asaasiga ah. Ka dib markii ay soo bandhigistaan ​​rasmiga ah ee macruufka 9, kuwaas oo isaga mid hayn badan si waxa ay xoogaa ka horreeyay dhibkiisa ', edition 9 this isagoo ku laayeen oo muuqaalada aan caadi ahayn waa maalin kasta oo si fiican. macruufka 8 dabcan lahaa baaxadda kasta oo horumar iyo caqabad ku ah hadda been ku dul shirkadda si aad u aragto haddii ay la go'an ama hoog waxaa lagu sii daray.
Si aad u hesho tallaabo dhamaystiran iyo aqoon talaabada ku saabsan waxa macruufka 9 heysta idiin, sii akhriyo.
Maxay cusub ee macruufka 9 keeno?
Waayo, waxaa inoo waxaa lagugu ah maamuustaan, macruufka ah 9 waa inay ku nool yihiin ilaa waxa uu ballan qaaday in samatabbixin. Halkan qaadashada eegno dhawr xijiyaan caan ah iyo Capital One.
"Ka hortag 'Kaaliyaha
Tani muhiimad ahaan waa version Google ka Apple, ka shaqeeya sida ku xigeen oo ka masuul ah aggregating xogta oo dhan Xiriirada , Calendar, Siri, barnaamijyadooda dhinac saddexaad iyo wixii la mid ah.
Qaab batari Top-uruursanayey
Gargaarka A aadka loogu baahan yahay ka Apple ayaa ugu danbeyn halkaan fuliyo. Macruufka ayaa 8 lahayn habboon hab keydinta batteriga. Waad ogayd in deminta xogta ama Bluetooth ama xataa Wi-Fi gebi ahaanba la nasasiiyay aad on. Iyadoo version 9, bixinta saddex saacadood oo dheeraad ah isticmaalka waa isbedel soo dhawaynayaa.
Waxaa jiray baahan yahay degdeg ah si ay kor Siri, gaar ahaan ka dib markii ay inta badan hortag helo. Ayaa sii daayo cusub waxay bixisaa taageero ballaaran ee dhammaan amarrada af dabiiciga ah phone oo dhan, si ay u soo bandhigay interface cusub mahad. Waxa ay noqon doontaa weyn arkaya adeegga mar Waxyeelo beddelo mid ka fiican.
Diirada la casriyeeyay
A cusub Spotlight waa a-saarka by of 'super Siri' iyo 'Ka hortag Kaaliyaha'. Just xaaqin bidixda ee shaashada guriga oo aad ka heli doonto xog xiriir la daadiyo soo jeediyay yar, dhacdooyinka taariikheed, ad illaha macluumaad hoose iyo wixii la mid ah.
Hagaajiyey ee Apple Maps
Shirkadda hadda ku faantaa in isagoo Apple Maps kuwa fog oo fiican oo si weyn loo isticmaalo codsiga khariirada ee macruufka (3.5 jeer ka badan 'soo socda app khariidaynta hoggaamineed'). Tani ee macruufka 9 ayaa la rumeysan yahay si ay u helaan dhowr jiho ka badan gaadiidka, kaas oo Kor U doonaa sumcaddii kaliya.
macruufka 9 vs. macruufka 8: barbardhigo A
Isticmaalka Battery kordhiyay
Battery nasasiiyay inta badan ku data, Bluetooth, iwm
"Waayo-aragnimo A fiican xiriiri kasta '
Waayo-aragnimo Touch weli isku waxba gaar ahaan in ay ku faanaan
Stock widget xaaladda show batari ah iPhone iyo isku xira Apple Watch ay la socoto 'ka heli saaxiibaday'
No feature sida joogo ee xarunta wargelinta ah ee macruufka ah 8
Multitasking, jecel dhab ah kulul version 9
No macquul ah multitasking
Beerta raadinta New hogaanka ka dib markii goobaha
Screen Home ku jira app cusub ee boorsada jeebka oo beddelaya passbook
Salada app maqan
Hab Reader ee Safari caawisaa midabka asalka dooro iyo farshaxan
Hab Reader waxa uu leeyahay asalka isla cad
New 'share' fursadaha xiriir
No 'share' doorasho. Keliya 'gooyay', 'copy', 'qeexo'
Keyboard ku jira / kiiska hoose warqad furayaasha sare
No doorasho sida
Qoraalada app leeyihiin fursado ay ku darto sawir, sawiro, formatting text isbedel, liiska iyo qaar badan oo
Version Limited ee fursadaha
Waa kuwee qalabka cusboonaynta kartaa in macruufka 9?
Iyada oo sida ugu fiican ee qaababka cusub iyo barnaamijyadooda, users macruufka sare kartaa sheeko la mid ah gargaarka. Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah arrin muhiim u muuqataa in Bog badan oo iyaga ka mid ah hoos u yahay upgradeability qalab. Laakiin waxaa war fiican ah in iPhone in waa sida jirka sida iPhone 4s iyo iPads xataa sida iPad 2 awood u yeelan doonaan in ay sii wadaan macruufka 9 habsami leh. Waa wayn ka jawaabaan oo ka dhakhso badan macruufka 8, sidaas oo kale qof ka filan karto wax badan lagu kaydiyo oo ay degan tahay iyo habka ka kaaftoomi la'aan ah devoices ka weyn ah. Si aad u xuso dheeraad ah oo yar, iPhone 5, 5C, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus oo ka mid ah iPads, Air, Air 2, 2, jiilka 3aad, mini 3, mini 2 iyo mini iyo sidoo kale iPod jiilka 5aad taaban cusboonaynta kartaa in macruufka 9 si fudud. Hubaal Apple waa noqonee in hab!
Aad u cusboonaynta doonaa in macruufka 9?
Waa in aad u cusboonaynta in macruufka 9 ama aan si buuxda waa go'aan qofka. Si kastaba ha ahaatee, doorashada ballaaran ayaa laga sameeyay iyo xaqiiqada u sheegay, wax badan oo ka mid ah ayaa sugi la muujiyey ujeedadooda hor socda waxaa la. Ka dib oo dhan, mana jirto wax dhibaato samayn! Yaan jeclaan faa'iidooyinka ku riyaaqayaa ka version cusub ma, gaar ahaan marka aad leedahay fursad aad ku dhowaad dhammaan casriyeeyo iPhone oo waaweyn, iPad iyo wixii la mid ah.
> Resource > macruufka > macruufka Apple ee 9 vs macruufka 8